सांसद विकास कोषको खारेजी
सांसद विकास कोषको नामले चिनिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदोर कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनिवार्य खर्च गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर रहेको अवस्थामा कोषको खर्चको प्राथमिकतामा चौथो तहमा रहेको स्वास्थ्यलाई अनिवार्य गर्न लागिएको हो । यो कदम सकारात्मक छ तर अपर्याप्त छ ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको सबै रकम यसपटकका लागि मात्र भए पनि कोरोना कोषमा पठाउनुपर्ने हो । सानो रकम भए पनि यसले दिने सन्देश ठूलो हुन्थ्यो । तर, सरकार यसमा चुकेको देखिन्छ ।
सरकारले बजेटमा कोषको रकम कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च हुने बताए पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने गरी प्रस्ताव अघि सारेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमका कारण सरकारको आम्दानीमा दबाब परेको छ । साथै, कोरोना उपचारका लागि सरकारी खर्च बढेको छ । यस्तोमा बजेटमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको सबै रकम यसपटकका लागि मात्र भए पनि कोरोना कोषमा पठाउनुपर्ने हो । सानो रकम भए पनि यसले दिने सन्देश ठूलो हुन्थ्यो । तर, सरकार यसमा चुकेको देखिन्छ । सरकार कोषको रकममा सांसदहरूको हालीमुहाली कायम रहोस् भन्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
पूर्वाधार कोषको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको र यसले आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम नगरेको भनी निकै आलोचना भइरहेको छ । बजेट तयारीको क्रममा यसको विरोध प्रशस्त हुने गरेको छ । यसपटक त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेर कोष खारेजीको माग गरेको थियो । तर, यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो, जसको कारण बुझ्न सकिएको छैन ।
यद्यपि,व्यापक विरोध भएकै कारण चालू वर्षको बजेटमा कोषको रकम भने घटाइयो । गत आवमा प्रतिसांसद ६ करोडका दरले ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा चालू आवमा रू. ४ करोडका दरले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रू. ४ करोडमध्ये १ करोडमात्रै स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्चिन अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय पूर्वाधार कोषको रकम दूरदराजका क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी खर्च हुने गरेको छ । बढी जनसंख्या भएको ठाउँमा बढी सांसद हुने भएकाले कोषको रकम सहरी क्षेत्रमा नै बढी खर्च हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता रिझाउन मन्दिर निर्माण, सभासम्मेलन जस्ता अनुत्पादक कार्यमा बजेट खर्चने गरेको पाइन्छ । एकपटक निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेको सांसदले सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रुपैया“ जनता रिझाउन खर्च गर्ने र त्यसबाट मतदान नै प्रभावित हुने हुँदा यसले चुनावी परिणाममा असर पानुका साथै महँगो पनि बनाएको छ । विकास बजेटको दुरुपयोग भएका थुप्रै समाचार बाहिरिएका छन् । सांसदहरू नीति निर्माताभन्दा विकासे कार्यकर्ता बनेर मतदाता रिझाउनतिर लाग्नु गलत हो । अर्को, संघीयतामा केन्द्रभन्दा स्थानीय सरकार बलियो बनाउने सैद्धान्तिक मान्यताविपरीत केन्द्रबाट नै खर्च गराउने काम भएको छ । यो कोष खारेज गरेर यस्तो रकम सीधै स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिनुपर्थ्यो ।
कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि बजेट अभाव भएको भन्दै सरकारले बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताइरहेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधार बलियो नहुँदा अहिले आइसोलेशन, परीक्षणलगायत काम गर्न नसकिएको अवस्था छ । अहिले मुुलुकमा स्वास्थ्य पूर्वाधार बलियो बनाउन आवश्यक देखिएको छ । चालू बजेटले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि छ । तर, बजेटको अपर्याप्तताका कारण कोरोना संक्रमितको उपचार, यसको परीक्षणमा सरकारले कन्जुस्याइँ गनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीले पर्याप्त उपकरण नपाएको, स्वास्थ्य सावधानीका साधन पनि नपाएको जस्ता गुनासो गरिरहेका छन् । यसरी स्रोतको कमीले समस्या बढिरहेका बेलामा यो रकम थोरै भए पनि केही सहयोग मिल्थ्यो । मुख्य कुरा कोषको विकृति रोक्न सकिने अवसर सरकारले गुमाएको देखिन्छ ।